မှတ်​တမ်း​များ​ အများနှင့်ဆိုင်သောမှတ်တမ်းအားလုံး Abuse filter log Content model change log Global account log Global block log Global rename log Global rights log Mass message log Tag log Tag management log TimedMediaHandler log Upload တင်သည့် မှတ်တမ်း User merge log ကာကွယ်မှုများ၏ မှတ်တမ်း ကျေးဇူးတင်ခြင်း မှတ်တမ်း စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးမှု မှတ်တမ်း ထည့်သွင်းသည့် မှတ်တမ်း ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း ပေါင်းလိုက်သော မှတ်တမ်း ဖျက်ထားသည်များ မှတ်တမ်း ရွှေ့ပြောင်းခြင်း မှတ်တမ်း အသုံးပြုသူ အမည်ပြောင်းလဲခြင်း မှတ်တမ်း အသုံးပြုသူအသစ်ရောက်လာခြင်း မှတ်တမ်း အသုံးပြုသူ၏ အခွင့်အရေးများ မှတ်တမ်း ဆောင်ရွက်သူ - ရည်ရွယ်ရာ (ခေါင်းစဉ် သို့ User:အသုံးပြုသူအတွက် အသုံးပြုအမည်):
ကျေးဇူးတင်ခြင်း မှတ်တမ်း ပြ | စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးမှု မှတ်တမ်း ပြ | ပြ tag log
၀၅:၅၁၊ ၂၉ ဧပြီ ၂၀၁၅ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) သည် File:MMA logo.png ကို upload တင်ခဲ့သည် (မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတအစည်းအရုံး လိုဂို)
၁၈:၅၄၊ ၆ ဧပြီ ၂၀၁၅ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) သည် File:Nagar Cheroot.jpg ကို upload တင်ခဲ့သည်
၀၇:၀၉၊ ၃ ဧပြီ ၂၀၁၅ ခွေးလှေယားပင် စာမျက်နှာကို ခွေးလှေးယား သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၇:၁၈၊ ၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅ File:Website Font Issue.svg ၏ ဗားရှင်းအသစ်ကို Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) upload တင်ခဲ့သည် (This isareadable vector image texts for readers with non-standard fonts installed.)
၀၇:၁၁၊ ၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅ File:Website Font Issue.svg ၏ ဗားရှင်းအသစ်ကို Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) upload တင်ခဲ့သည် (This isareadable vector image texts for readers with non-standard fonts installed.)
၀၇:၁၀၊ ၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) သည် File:Website Font Issue.svg ကို upload တင်ခဲ့သည် (This isareadable vector image texts for readers with non-standard fonts installed.)
၁၇:၅၂၊ ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) သည် File:Gantgawdaw Pagoda.jpg ကို upload တင်ခဲ့သည် (Screengrab from my own travel-log video. https://www.youtube.com/watch?v=tTOdZGfts9o)
၁၇:၁၁၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၅ ဟင်္သာတမြင့်ငွေ စာမျက်နှာကို မြင့်ငွေ၊ ဟင်္သာတ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည် (Sort Name)
၁၀:၀၈၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၅ တျံတြစ်အယူဝါဒ စာမျက်နှာကို တန္တရအယူဝါဒ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည် (Correct Spelling)
၁၈:၁၁၊ ၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၄ ဥသြ စာမျက်နှာကို ဥဩ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည် (Correct spelling)
၁၃:၂၀၊ ၂၀ မတ် ၂၀၁၃ ဝိဇ္ဇာ စာမျက်နှာကို ဝိဇ္ဇာ စာရိုက်စနစ် သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၁:၃၂၊ ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) သည် File:Comedian Mos.jpg ကို upload တင်ခဲ့သည် (Myanmar Comedian Mos လူရွှင်တော် ဟာသသရုပ်ဆောင် မော့စ် မော့(စ်))
၀၅:၃၁၊ ၃၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ ဧရာ၀တီဘဏ် စာမျက်နှာကို ဧရာဝတီဘဏ် သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည် (fix encoding)
၁၇:၂၄၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၁၂ သြလကော့ လွီဇာမေ စာမျက်နှာကို ဩလကော့ လွီဇာမေ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည် (fix Unicode sequence)
၁၇:၂၄၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၁၂ သြဘာသ၊ ဦး (မင်းဘူး) စာမျက်နှာကို ဩဘာသ၊ ဦး (မင်းဘူး) သို့ ပြန်ညွှန်းပေါ်ထပ်၍ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) က ရွှေ့ခဲ့သည် (fix Unicode sequence)
၁၆:၁၆၊ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၂ မွန်ရှီရွာရွာ စာမျက်နှာကို မွန်ရှီရွာ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၁၆:၀၅၊ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၂ ဒူးရင်းသြဇာ စာမျက်နှာကို ဒူးရင်းဩဇာ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည် (fix encoding)
၀၇:၁၄၊ ၁၁ ဧပြီ ၂၀၁၂ တိုက်တန် စာမျက်နှာကို တိုက်တန် (လ) သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၈:၃၇၊ ၃၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၂ ၃။ကာေမသုမိစၧာစာရ စာမျက်နှာကို ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည် (convert to unicode)
၀၅:၀၄၊ ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ မြန်မာသရီးဖောင့် စာမျက်နှာကို မြန်မာသုံးဖောင့် သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၄:၀၈၊ ၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ ဆမူစာ စာမျက်နှာကို စမူဆာ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည် (fix spelling)
၁၄:၀၀၊ ၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၁ မဟူရာ စာမျက်နှာကို မဟူရာကျောက် သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၁၃:၅၉၊ ၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၁ မဟောဂနီ စာမျက်နှာကို မဟော်ဂနီ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၇:၂၃၊ ၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၁ ကြည်ြုည်ဌေး စာမျက်နှာကို ကြည်ကြည်ဌေး သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၇:၁၅၊ ၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၁ ကြည်⁠ကြည်ဌေး စာမျက်နှာကို ကြည်ြုည်ဌေး သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၁၅:၄၈၊ ၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စာမျက်နှာကို သန်းရွှေ၊ ဦး သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည် (retired update)
၁၄:၁၅၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ ဆိုက်ဒါနှင့်ပယ်ရ စာမျက်နှာကို ဆိုက်ဒါ နှင့် ပယ်ရီ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၁၄:၅၀၊ ၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ Talk:လစ်တင်ရှတိုင်းနိုင်ငံ စာမျက်နှာကို Talk:လစ်တန်စတိန်းနိုင်ငံ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၁၄:၅၀၊ ၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ လစ်တင်ရှတိုင်းနိုင်ငံ စာမျက်နှာကို လစ်တန်စတိန်းနိုင်ငံ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၆:၃၁၊ ၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ ဆဲလဒင် စာမျက်နှာကို ဆလာဒင် သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၆:၂၀၊ ၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ ဆဲ့နှစ်ရာသီပင် စာမျက်နှာကို ဆယ့်နှစ်ရာသီပင် သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၆:၅၃၊ ၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ ဆူပါဆွန်းနစ် စာမျက်နှာကို အသံထက်မြန်သောအလျင် သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၆:၄၉၊ ၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ ဆူဒန်နယ် စာမျက်နှာကို ဆူဒန်နိုင်ငံ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၇:၁၂၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ Talk:ဆလိုဗားကီးယားပြည်နယ် စာမျက်နှာကို Talk:ဆလိုဗားကီးယားနိုင်ငံ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၇:၁၂၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ ဆလိုဗားကီးယားပြည်နယ် စာမျက်နှာကို ဆလိုဗားကီးယားနိုင်ငံ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၆:၀၄၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ ဂျီနီးဗာမြို့ စာမျက်နှာကို ဂျီနီဗာမြို့ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၆:၀၄၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ ဂျီနီးဗားမြို့ စာမျက်နှာကို ဂျီနီးဗာမြို့ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၅:၄၃၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ ဆဟားရားသဲကန္တာရ စာမျက်နှာကို ဆဟာရ သဲကန္တာရ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၁၅:၁၆၊ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ Template:User Wikipedia For စာမျက်နှာကို Template:User Wikipedian For သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၁၄:၃၇၊ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ ဆပင်နိုဇာ ဗီ စာမျက်နှာကို ဆပင်နိုဇာ ဘီ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၇:၃၉၊ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ စံပါ စာမျက်နှာကို စမ္ပာ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၆:၃၇၊ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ ဆခွဲကိန်းများ စာမျက်နှာကို ဆခွဲကိန်း သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၆:၂၄၊ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ စိမ်းစားဥ စာမျက်နှာကို ပဲစိမ်းစားပင် သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၆:၁၈၊ ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ စကားပန်း စာမျက်နှာကို စံကားပန်း သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၁၇:၂၂၊ ၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ စိန်ဖရန်းစစ် စာမျက်နှာကို စိန့်ဖရန်စစ်(စ်) သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၁၇:၀၆၊ ၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ စိန်ပေါလ်ကသီဒရယ် စာမျက်နှာကို စိန့်ပေါလ်ကသီဒရယ် သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည် (more common usage)
၁၂:၃၇၊ ၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၁ စိန်ပီတာ စာမျက်နှာကို စိန့်ပီတာ သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည် (Spelling fix)
၁၆:၂၇၊ ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၁ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ'ီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး စာမျက်နှာကို မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၁၆:၂၇၊ ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၁ မြန်‌မာနိုင်‌ငံလုံးဆိုင်‌ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်‌တစ်‌တပ်‌ဦး စာမျက်နှာကို မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ'ီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည်
၀၂:၂၃၊ ၂၈ ဇွန် ၂၀၁၁ အဲလစ်ကလေး၏ ထူးဆန်းသော အိမ်မက် စာမျက်နှာကို အဲလစ်ကလေး၏ ထူးဆန်းသော အိပ်မက် သို့ Lionslayer (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)က ရွှေ့ခဲ့သည် (fix spelling)
"https://my.wikipedia.org/wiki/Special:Log/Lionslayer" မှ ရယူရန်